Otu esi eme ka ihe di nma n'ime ahia ahia gi | Martech Zone
Anyị jụrụ ajụjụ na nso nso a - ma nye nkọwa ụfọdụ - ma ọ bụ na ọ bụghị nke gị atumatu ahia ahia bu ihe banyere imeputa ihe, onu, ma obu ikike ulo. Nsogbu anyị na-aga n'ihu na-ahụ bụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ịkọpụta ọdịnaya na-enweghị nyocha na melite nsonaazụ.
Nkọwapụta nke ara adịghị eme otu ihe ugboro ugboro mana na-atụ anya nsonaazụ dị iche? Ọ bụrụ na nke ahụ kọwara atụmatụ azụmaahịa gị, ị nọ ná nsogbu, ọ dịkwa gị mkpa ịkwụsị ịwụfu oge na ihe onwunwe na mposi. Gị nwere ike nweta ụfọdụ utịp, ma ohere ka ị na-akwọ ụgbọala ọtụtụ ihe ndị a nke nloghachi na ulo oru mbo dị nnọọ na-ewe a bit ọzọ analysis na mgbalị.
Ihe omuma a site na BrightEdge, ihe SEO n'elu ikpo okwu, Na-elekwasị anya n'otú usoro ịre ahịa ọdịnaya dị mma jikọtara ya na mbọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike dịkwuo ogo nyocha gị.
Ahịa ọdịnaya na-arụ ọrụ site na ọgụgụ isi SEO iji wuo ikike ma nwekwuo mmata nke ika gị. Ezigbo ọdịnaya ga-ewulite mkpakọrịta dị mma na akara gị. Imirikiti nke ọdịnaya a ga-enyere aka mee ka ụlọ ọrụ gị dị elu karịa na nsonaazụ ọchụchọ n'ihi ikike dị elu. Sudhir Sharma
N'ime usoro ahia ahia ahia, olile anya na-agbanwe site na otu onye na ozo. Iji maa atụ, ọdịnaya gị a na-ekenye na soshal midia nwere ike iru onye na-achọzi ngwaahịa, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Nke ahụ dabara ha na saịtị gị wee banye maka akwụkwọ akụkọ email gị. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ha gụrụ akụkọ site na email wee kpebie ịtụgharị. Usoro ziri ezi ebe ị na-enyocha isiokwu gị, hazie ọdịnaya gị, ma tụọ nzaghachi ga-ebugharị ikike ọdịnaya.
Tags: gbanye ọkụikike ọdịnayaNsonaazụ ahịa ọdịnayaatụmatụ ịre ahịa ọdịnayankwalite ọdịnayankwaliteogo ọchụchọAnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya